गत शुक्रवार नेपालमा एकसाथ दुई फिल्म रिलिज, तर हिरो गुमनाम ! - Gokarna News
शुक्रबार, साउन ०३, २०७६
गत शुक्रवार नेपालमा एकसाथ दुई फिल्म रिलिज, तर हिरो गुमनाम !
आइतबार, बैशाख ०१, २०७६ by Gokarna News
काठमाडौं– गत शुक्रवार नेपालमा एकसाथ दुई फिल्म रिलिज गरिए । ‘ए मेरो हजुर ३’ र ‘यात्रा’ एकसाथ सिनेमा घरमा रिलिज भए । फिल्ममा अनमोल केसी र सलिनमान बनियाको निकै चर्चा गरियो ।
फिल्मबाट डेब्यु नायिकाद्वय सुहाना थापा र मलिका महतको पनि निकै चर्चा भयो । तर, दुवै फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाएका सलोन बस्नेतको भने कहीँकतै चर्चा भएन । यतिबेला उनी दुवै फिल्मको प्रतिक्रिया लिनमा व्यस्त छन् ।
फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ मा सलोन अनमोल केसीको साथी बनेर अभिनय गरेका छन् । फिल्ममा उनी मुख्य भूमिकामा नै छन् । फिल्ममा उनलाई इन्जिनियर विद्यार्थीका रुपमा देखाइएको छ । जो सानैदेखि प्रेम (अनमोल केसी) सँग साथी बनेका छन् । अभिनयका हिसाबले उनको अभिनयको पनि तारिफ गरिएको छ ।
संयोग नै भन्नुपर्छ, हलमा रिलिज भइरहेको सलोनको अर्को फिल्म ‘यात्रा’ मा पनि उनको मुख्य भूमिका छ । र, सलोन एक पात्रको सानैदेखिको साथी हुन्छन् । यो फिल्ममा सलोनको चरित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को भन्दा फरक पनि छ ।
सलोनले मुख्य भूमिका निभाएका एकसाथ दुई फिल्म रिलिज भए पनि उनी गुमनाम छन् । उनको खासै चर्चा छैन । जबकि, सलोन पनि अनमोल केसीसँगै उदाएका अभिनेता हुन् ।
हलमा दुई फिल्मले व्यापार गरिरहँदा पनि आफ्नो चर्चा नहुँदा सलोनलाई पनि नमज्जा नै लाग्दो हो पक्कै ! सलोनले पनि आफ्नो करिअरलाई ख्याल गरेर राम्रा भूमिकामा काम गर्ने हो भने उनलाई अझ फाइदा हुने थियो कि !
काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा चोरीका घटना बढ्योः सुन पैसासहित रक्सीका बोतल पनि चोरी !
१ लाख घुससहित काठमाडौं महानगरपालिकाका नायव सुब्बा पक्राउ
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्षका कारण रोकियो मेलम्ची आयोजनाको काम !
काठमाडौंकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई हृदयघात
बेशीगाँऊ युवा समुहको आयोजनमा निशुःक आँखा शिविर संचालन हुँदै
गोकर्णेश्वरको बजेट एक अर्ब ४४ करोड, ९० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धालाई विशेष भत्ता दिईने
हेर्नुहोस फिट केकीको ‘हट’ अवतार (फोटोफिचर)
बलिउडका १४ बर्षिय बाल कलाकारको सडक दुर्घटनामा मृत्यु
टम क्रुजको फिल्म ‘टप गन माभरिक’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
किन सर्‍यो प्रभासको फिल्म ‘साहो’ को रिलिज डेट ? यस्तो छ कारण
पुष्पको प्रेममा परिन् साम्राज्ञी (भिडियो)
आज शुक्रबारदेखि सुरक्षाको फिल्म ‘घर’ रिलिज
प्रजिअ नै लोकसेवाका परीक्षार्थी बस्ने बासको खोजीमा निस्किएपछि…
बुद्धको मूर्ति तोडफोड गर्नेलाई कडा कार्वाही गर्न राप्रपाको माग
१० वर्षीया छोरीलाई करणी गरेको अभियोगमा बाबु पक्राउ
वास्तबमा किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो ? कारण यस्तो
भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टमको विरोधमा राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ सडकमा
लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पुत्ला दहन
अफ्रिका कप अफ नेसन्सः उपाधिका लागि सेनेगल र अल्जेरिया भिड्दै